नेपाली क्रिकेटप्रेमीहरुले नभुल्ने यो ऐतिहासिक जितको दृश्य अनि त्यो रोमाञ्चक अन्तिम ओभर – MySansar
आजको दिन नेपाली खेलप्रेमीहरुका लागि ऐतिहासिक दिन हो। नेपालले पहिलो ओडिआई (वन डे इन्टरन्यासनल) क्रिकेट जित्यो। खेल यति रोमाञ्चक र सास नै रोकिने खालको थियो कि अन्तिम बलसम्म पनि कसैको पनि जित हुन सम्भव थियो। र माथिको त्यही दृश्य हो जसका कारण नेपालले जित हात पार्‍यो। पारस खड्काले बलिङ गरेको अन्तिम बलमा बल अर्को छेउतिर गएको भए र ब्याटिङ गर्ने खेलाडीले रन पूरा गरेको भए खेल बराबरीमा टुङ्गिन्थ्यो। तर रन लिन यता आउन नपाउँदै पारसले बल टिपेर स्टम्प उखेलेपछि रन आउट भयो र नेपाल एक रनले विजयी भयो। यो ऐतिहासिक क्षणको ऐतिहासिक दृश्य सधैँका लागि स्मरणीय बन्नेछ। अन्तिम ओभरको स्कोर झन् मुटुको धड्कनै रोकिएला जस्तो बनाउने थियो।
सन्दीप लामिछानेले ४३.३ ओभरमा स्नेटरलाई बोल्ड गर्दा त्यो नवौँ विकेट थियो नेदरल्यान्डसको र स्कोर थियो १८५ रन। जितका लागि आवश्यक थियो २१७ रन। कठिन देखिन्थ्यो लक्ष्य। तर अन्तिम विकेटका लागि दुई ब्याट्सम्यानले राम्रो साझेदारी गर्दा नेपाल झण्डै हारको संघारमा पुगेको थियो।
४८ ओभरको समाप्तिसम्म नेदरल्यान्डसलाई जितका लागि १२ बलमा ९ रन आवश्यक थियो। ४९ औँ ओभरमा बलिङका लागि पारसले दीपेन्द्रसिह ऐरीलाई अह्राए।
पहिलो बल कुनै रन बनेन।
दोस्रो बल एक रन बन्यो।
तेस्रो बल कुनै रन बनेन।
चौथो बल कुनै रन बनेन।
पाँचौँ बल एक रन बन्यो।
छैटौँ बल एक रन बन्यो।
उनले ओभरमा ३ रन दिएपछि अन्तिम ओभरमा जितका लागि ६ बलमा ६ रन आवश्यक भयो। अन्तिम ओभर बलिङका लागि कप्तान पारस आफै अघि सरे।
पहिलो बलमा एक रन (अब पाँच बलमा पाँच रन आवश्यक)
दोस्रो बलमा सून्य रन (अब चार बलमा पाँच रन आवश्यक)
तेस्रो बलमा एक रन बन्यो (अब तीन बलमा चार रन आवश्यक
चौथो बलमा मिस फिल्डिङका कारण दुई रन बन्यो। (अब अन्तिम दुई बलमा दुई रन आवश्यक)
पाँचौ बलमा कुनै रन बनेन।
अन्तिम बलमा एक रन लिए खेल बराबरी र दुई रन लिए नेदरल्यान्डसले जित्थ्यो। तर अन्तिम बलले नन स्ट्राइकर रहेको ठाउँको स्टम्पमा लागेर विकेट झर्‍यो। विकेट झरे पनि पारसले गुड्दै आएको बललाई लिएर आफू नजिकैको स्टम्प उखेलेपछि क्लास्सेन रनआउट भए र नेपालले खेल एक रनले जित्यो।
ऐतिहासिक जितपछिको ऐतिहासिक सेल्फी। फोटो सौजन्य : रमन शिवाकोटी
आजको खेलमा स्मरणीय अरु पक्ष
-अस्ति अर्धशतक हानेका ज्ञानेन्द्र आजको खेलमा १३ रनमै आउट भए। चौथो नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका पारसले ६९ बलमा ५१ रन बनाए। पारसले ६ वटा चौका र दुई वटा छक्का हानेका थिए। नेपालका लागि ओडिआईमा दुई छक्का हान्ने पहिलो खेलाडी पारस बने। ३०.६ ओभरमा नेपालको स्कोर १३५ रन हुँदा छैटौँ विकेटका रुपमा पारस आउट भए।
-नेपालका ब्याटसम्यानहरु लगभग सकिसकेको अवस्थामा सोमपाल कामीले सबैभन्दा बढी ६१ रन बनाए। आठौँ नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका सोमपालले नेपाली खेलाडीले ओडिआईमा अहिलेसम्मकै उच्चस्कोर बनाएको रेकर्ड राखे। उनले तीन वटा छक्का र पाँच वटा चौका पनि प्रहार गरे। २०४ रन बनाउँदा नवौँ विकेटका रुपमा सोमपाल आउट भए। बलिङमा पनि उनले पहिलो ओभरको दोस्रो बलमै माइबर्घलाई आउट गरे।
-११४ रनमा दुई विकेटको क्षतिको स्थितिलाई सन्दीप लामिछानेले दुई बलमा दुई विकेट लिएर नेदरल्यान्डसलाई झट्का दिए। २८.४ ओभरमा सन्दीपले ३९ रन बनाइसकेका दि जे टेरबाराकलाई एलबिडब्लु धरापमा पारे। त्यसको दुई बलपछि दे लिडेलाई ० रनमा आउट गरे।
-आजको खेलमा सुवास खकुरेल, रोहित पौडेल र ललितसिंह भण्डारीले ओडिआई डेब्यु गरेका थिए। रोहित पौडेल ओडिआई डेब्यु गर्ने विश्वकै चौथो कम उमेरका खेलाडी बने।
-पारसले ६ ओभर बलिङ गर्दै २४ रन खर्चेर १ विकेट लिए। नेपालका कप्तान उनले ४३औँ ओभरमा डच कप्तान पिटर सिलर (२१) लाई ज्ञानेन्द्र मल्लको हातबाट क्याचआउट गराएका थिए।
आगामी ४ वर्षका लागि ओडिआई स्ट्याटस प्राप्त गरेको हो अर्थात् सन् २०१८ देखि २०२२ सम्म यो कायम रहने छ। नेपालले दुई खेलको यो शृङ्खला १-१ को बराबरी गरेको छ। अर्को शृङ्खला कोसँग र कहिले खेल्ने निश्चित छैन।
विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च संस्था आइसिसीको पूर्ण सदस्यता पाएको १२ वटा टेस्ट खेल्ने देशहरुसित स्थायी ओडिआई स्टायटस छ। ती हुन्, अस्ट्रेलिया, बेलायत, न्युजिल्यान्ड, पाकिस्तान, वेस्ट इन्डिज, भारत, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रिका, जिम्बाब्वे, बंगलादेश, अफगानिस्तान, आयरल्यान्ड।
सन् २००५ देखि आइसिसीको एसोसिएट सदस्यहरुमध्यबाट पनि चार वटालाई अस्थायी ओडिआई स्टायटस दिने निर्णय भयो। नेदरल्यान्डस, युएई र स्कटल्यान्डसहित नेपालले अस्थायी स्टायटस पाएको हो।
2 thoughts on “नेपाली क्रिकेटप्रेमीहरुले नभुल्ने यो ऐतिहासिक जितको दृश्य अनि त्यो रोमाञ्चक अन्तिम ओभर”
हैन, बल अम्पायरको खुट्टा मा होइन stump मा लगेर फिर्ता भाको हो !!!
तर जे जस्तो भए पनि नेपालले राम्रो खेलेको हो र भाग्य आज नेपाल को साथमा थियो !!!
आम्पायर लाइ धेरै धेरै धन्यवाद ! उनको धेरै निर्णय हरू नेपालको बिरूध थियो भने यो बल अचानक उनको खूट्टामा थोक्कीदा नेपालको लागी The God of Leg भयो । हैन र